Pet is healer wakho
Ngitshele, ingabe uthola injabulo lapho ihlumela elifiphazelayo ligijima kuwe emadolweni akho bese liqala ukugaya kusuka ekushayeni kwakho? Yiqiniso, ngisho nokuvakashela nokuthatha isilwane somunye umuntu, sifuna kuqala ukumnika ujabule ukushaya / ukukhipha, bese uthola injabulo nokuphulukiswa ekuhlanzeni kwakhe.
Yiqiniso, ukulungiswa kwethu kumvuthwandaba owodwa ngesilwane esingaziwa ngesikhathi sokuhlanza ukushintsha kwezezimali okuhlukile kakhulu kunesilwane sakho. Uma ufunda ukuzwela isilwane sakho, ungaqonda okuningi okuthakazelisayo nokuwusizo kuwe nendlela yakho yokuphila. Kulesi sihloko, uzothola ukuthi kungakanani okuhle empilweni yakho ongayithola ekukhulumeni nekati / ikati lakho.
Qala okuncane mayelana nokuhlanza okukhulu. I-purr ikhatha kanjani? Kulesi sihloko asikho impendulo engavamile, abanye bathi kunezimbambo zamanga ezingamanga, ezinye ezikhanyayo. Zama ukulalela lapho umsindo uvela khona, futhi uzoqonda ukuthi nomaphi lapho silalela khona, ukukhononda kufana nokufana nomzimba wonke. Angazi impendulo yangempela, kungani kunjalo, futhi lokhu akuyona into esemqoka, kodwa ngiyazi ukuthi ukuhlanza kuyisimo esikhethekile somndeni wekati, okudala ukudalwa kwamandla okusebenza okubalulekile, okubaluleke kakhulu, okubaluleke kakhulu. Yingakho ngaso sonke isikhathi sifuna ukuba ikati lihlume, lapho ezandleni zethu, siyazi ukuthi i-intuitively iyasiza kakhulu kithi nangesilwane. Eqinisweni, kukhona ukuqinisekiswa kwesayense kwalokhu. Kuvela ukuthi amakati "u-murch" ebangeni lobubanzi bama-25 kuya kwangu-150 Hz, emithi, la ma frequencies asetshenziselwa ukuphulukisa ama-fractures nezinye ukulimala kwamathambo.
Yini okudingeka ukuba ucabangele, ukuthi isilwane sakho saba udokotela wakho?
Okokuqala, ukuze imithi yokwelapha ihambele kahle, udinga ukuqapha ngokucophelela impilo yesilwane sakho (izitho, uboya, isikhumba, i-mucous, njll). Kulokhu, ukukhulumisana naye kuyohlale kuwukuphela kwakho.
Okwesibili, ukwelashwa kuzoletha inzuzo enkulu uma uthanda isilwane sakho ngobuqotho. Ngendlela, amakati, ngokungafani nezinja, ukufumbathisa ukudla kunzima kakhulu. Ngisho noma unikeza ukudla ekati lomunye, isimo sakhe sengqondo ngawe ngeke sishintshe. Bazwela kakhulu imizwelo yakho (uthando, intukuthelo). Ngakho-ke ngaphambi kokuba uphonse isilwane sakho, cabanga ngalokho ofuna ukumjezisa ngakho! Futhi akusiyo yini iphutha lakho ukuthi isilwane sibi? Ngami, isibonelo, ikati lendlu alibangeli izinkinga: ungalokothi ukhuphuke etafuleni ekhishini (kubalulekile ngesikhathi futhi udla ngokugcwele), uya endlini yangasese lapho kufanele khona (ukuhlanza ngesikhathi), izipikili zibukhali endaweni eyodwa (ukunikeza lokho okuzokwenza kuyasiza kuye, kodwa awunobungozi). Ngakho-ke, kwakungafanele ngimjezise kanye.
Uma uthanda isilwane sakho, futhi siyakuthanda, khona-ke singakwazi ukuphulukisa kalula izifo zakho eziningi, endaweni ethile njengokwelashwa okuyisisekelo (ukuphathwa ikhanda, ukucindezelwa kancane kancane), endaweni ethile njengenye eyengeziwe.
Uma usebenza, ngokwesibonelo, kukhompyutha, uzungeze ngokuzenzekelayo ngamandla, okhipha umshini wokuqapha, i-unit unit. Ikati lami livame ukuthatha lemisebe kimi. Uvele nje aguqe ngamadolo ami, agubhe ubuso bakhe ngobuso bami futhi ahlume kakhulu. Ngesikhathi esifanayo ngiphazamiseka, ngiphatha ikati, ngizizwa ngikhululekile, bese kuthi ngemva kwalokho ngiphume egcekeni.
Uma uhlala emsebenzini isikhathi eside, isikhathi sidlula singaboni, futhi ngezinye izikhathi ulahlekelwa umuzwa wokukhathala futhi ikakhulukazi intamo. Ngisho njengezinyane, isilwane sami sifunde ukulala phansi entanyeni njengekolishi, ngenkathi elele ngokuthula. Ukukhathala kudlulile emaminithini ambalwa, ngoba i-kitten iduduza izinwele zayo futhi ibangele ukugeleza kwegazi esifundeni esincane (esikhathele) se-cervico-brachial.
Uma kukhona okuthile okulimazayo, lala kunoma iyiphi indawo ekhululekile, vumela ikati ngokwayo ukuthola indawo enhle, futhi uma iqala ukugubha, kuhle! Ngakho, ubuhlungu buzophindwa kabili ngokushesha. Uma nje elala phansi, ake elele phansi okwesikhashana, bese uqala ukushaya, isilwane sizobe sesiyale, sidale ukunganqikazi okuthile, futhi ngeke kube khona ukuhlukumeza ubuhlungu. Ngalesi sikhathi, zama ukucabanga ngalutho. Vumela ikati lakho likuphilise! Awukwazi nje ukuhamba ngekhanda noma ukuvuselela ingcindezi. Ngakho-ke, kungenzeka ukuphulukisa izifo ngokungathí sina (Yebo, ngokuhambisana nokwelashwa okukhethekile).
Ngezinye izikhathi ikati lingase libe nesifiso sokukhokha izingxenye ezithile zomzimba (ikhanda, izandla noma izinyawo). Myeke akwenze. Izilwane zisondelene kakhulu nemvelo kunathi, ngakho-ke zizwela futhi zizwela. Yiqiniso, kubalulekile ukukhumbula lapha ukuthi awudingi ukuvumela isilwane ukuthi sigqeke amanxeba avulekile.
Kuyasiza futhi ukubeka izilwane ezifuywayo emuva uma kunezifo zomgogodla, izinso. Isilwane ngokwaso siyobe sitholakala ngendlela elula, ekwakheni ukushisa okungeziwe nokugeleza kwegazi. Ikati ngokwayo iyazi ukuthi, kuphi futhi isikhathi esingakanani sokulala phansi.
Isilwane singakuxwayisa ngesifo esiseduze. Ngakho-ke, isibonelo, omunye wabangane bami, ikati lihlale lilele esiswini ngaphansi kwenkaba, futhi akukho lutho olungamkhathaza. Ulahlekelwe lesi siginali, walinda kuze kube yilapho lesi sifo sibonisa. Kodwa ngezibonakaliso zokuqala waphonsa izingcezu ezimbili ndawonye futhi ngokushesha waphendukela kudokotela. Wayene-cyst. Yiqiniso, ezimweni lapho isifo singathí sina (izinhlungu, isibonelo, zihlala njalo), udinga ukubona udokotela! Uma kunesidingo, udokotela uzohlinzekela ukwelashwa, kodwa uma uthatha imithi, ungakhohlwa ngesilwane. Mnike ithuba lokubonisa uthando lwakhe namandla akhe.
Ngendlela, isilwane asiphilisi thina kuphela, kodwa futhi ngokwayo, ngokuthungula, ngaleyo ndlela sibuyiselwe ibhalansi yamandla alo angaphakathi futhi ngenxa yalokho, impilo yayo.
Uthande izilwane zakho, bukela izilwane zakho, futhi ngokuqinisekile uzoba nempilo!
Umsizi waseNgilandi, incazelo yohlobo
Beauty salon yamakati nezinja
Imali engumngcwabo ilungu lomndeni langempela
Yehla othandweni nomuntu othile
Ukudla uju kusebenza, ngisho nalapho ulala
Izici zentuthuko yezingane ezisekhohlo
Ukunakekelwa ubuso ngesikhumba senkinga
Sling for the newborns: izindlela zokugqoka
Izinqubo ze-Spa ekhaya, zokupheka
Ukuphelela: Caterina Leman FW 2016-2017 iqoqo leholide
I-strawberry pie ne-vanilla
Inkukhu fillet nge buckwheat in multivariate